Ferrite magnet - China Ningbo enweghị
Nkọwapụta & Magnetik Properties
Ferrite mmepụta usoro Flow
Photos of Common akpụzi ka Ring, Disc, Arc, Block
Ferrite magnets are na-adịgide adịgide nju , not rare earth magnets, it is mainly made from iron oxide and strontium carbonate by ceramic processing technology, also called ceramic magnets.
Ferrite nju bụ kenkuwa, nwere ike arụpụtara site anwụ ịpị na mgbe sintering, nwere ike dị iche iche shapes na nha. Ya nkịtị na-arụ ọrụ okpomọkụ bụ n'etiti -40 ℃ na 250 ℃. Efere nju bụ ndị akacha eji na-adịgide adịgide magnet ihe ruru ha ala na-eri, mfe iji na-emepụta, magburu onwe corrosion na demagnetization eguzogide Njirimara. Ọ nwere ike na-emepụta ma isotropic ma ọ bụ anisotropic. C3, C5 & C8 nju bụ anisotropic. Ọ bụrụ na ị chọrọ ike magnetik ihe, anyị na-atụ aro sintered NdFeB nju like N52.
Pịnye: adịgide Igwe Ọdụdọ
ihe: Sintered Ferrite
ọkwa: Y30, Y30BH, Y33 etc ( Download Magnetik Property mpempe akwụkwọ nke SinteredFerrite nju )
Mmetụta & Size & Ndidi: Dị ka ahịa chọrọ, nwere ike omenala pụrụ iche & mgbagwoju shapes
Ngwa: ulo oru mbo, Motors, ọkà okwu, ntụ oyi usoro, crafts, kwa ụbọchị, ehi, wdg
Sintered Ferrite nju na-emepụta site n'ịkpa usoro nke ntụ ntụ nkà mmụta banyere ígwè. Ha na-ala na remanence, obere na magnetik permeability, ibu na coercive ike na ike iguzogide demagnetization, nke na-karịsịa kwesịrị ekwesị-eji dị ka magnetik circuit Ọdịdị nke ahụ ike na-arụ ọrụ ọnọdụ. Ferrite ihe onwunwe bụ ike na kenkuwa, nwere ike ebipụ site sịlịkọn carbide ngwaọrụ. Isotropic ferrite adịgide adịgide nju na-adịghị ike na ndọta ma a pụrụ magnetized dị iche iche na ikuziri. Anisotropic sintered ferrite nju nwere ike magnetik arụmọrụ, ma naanị magnetized tinyere ẹkedọhọde na ikuziri.
Osote: ehi nju
Ferrite Igwe Ọdụdọ